Window မတင်ချင်လို.ပါ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ရုံးက စက်ထဲမှာ virus ကိုက်တယ် လို.ထင်တာပဲ
processor က	i3-32220 ပါ.ဟိုတစ်လောက မှ စက်က အရမ်းလေးနေတာ ..သေချာကြည်.လိုက်တော. online ကျနေတဲ.အချိန်ဆို“
program တွေ ကို Trace တောင်လိုက်လို.မရဘူးးးအဲလောက်တောင်လေးနေတာ..online ရရင် မြန်တယ်..အခု online ရရင်တောင်
နှေးနေလို..ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ မသိတော.ဘူးးအဲပိုင်းဆို ကိုက ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးးMSEတင်ထားပြီး
Scan လည်းနေ.တိုင်းဖတ်တာပဲ ကို မရဘူးလေးနေတာပဲ..
အဲလို virus ကိုက်နေရင်လုံျးဝ Window ပြန်တင်ရမှာလားးး?
window မတင်ချင်ဘူး ဗျာ...Sofware တွေက အများကြီးတင်ထားတာ....?
ပြန်စာ - Window မတင်ချင်လို.ပါ
tune up ultities သုံးလိုက်နော် သိပ်မလေးတော့ဘူးထင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ် ကျတော်သိသလောက်ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်အကိုတို့ ရယ် တကယ်လို့မှားခဲ့ရင်တော့ ကျတော်ညံလို့ပဲနေမှာ သုံးကြည့်လိုက်ပါ မလေးပဲနဲ့ မြန်နေတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
virus ကိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား error တစ်တစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် window ပြန်တင်ရမယ့် အနေအထားရောက်နေတယ်
ဒါပေမယ့်ပြန်မတင်ချင်ဘူး။ ရပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှရမယ်။ window image backup လုပ်ထားပါ။
control panel > backup and restore CreateaSystem image ကိုသွားပြီး D,E တစ်ခုခုမှာ backup လုပ်ထား
ပါ။ error ဖြစ်လာရင် window ခွေထည့် boot တက်ပြီး backup file ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် backup
လုပ် ထဲက ကိုယ့် pc က error ကင်းနေဖို့တော့လိုပါတယ်။ backup file မရှိထားရင်တော့ မလွယ်ပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ rayon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by rayon
kaspersky anti-virus software ၀ယ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် full scan စစ်ပေးလိုက်ပါ။ window တင်ရင်တောင် virus က ရှိအုံးမှာပါ။ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာကတော့ anti-virus နဲံ virus ကို အရင်သတ်ရမှာပါ။ ပြီးမှာ ကျန်တာတွေ လုပ်ရမှာပါ..တစ်ချိူ့ software တွေကတော့ ပျက်ကောင်းပျက်သွားနိုင်ပါတယ်...သိချင်တာ၇ှိရင် ပြန်မေးနိုင်ပါတယ် အကို ...ကျေးဇူါ်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nightman1190 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Window XP / Vista /7တို့ကို Window 8 စတိုင်လေးပြောင်းသုံးဖို့ Window 8 Transformation Park ကျေးကျွန် Desktop Fun028-08-2012 05:18 PM
usb stick ဖြင့် window install လုပ်ခြင်း hlamyoeaung Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော910-07-2012 11:59 PM
Window Offline Update လုပ်ဆောင်ခြင်း သန့်ဇင်ဌေး အထွေထွေဗဟုသုတ002-12-2011 06:12 PM
Direct X programming ကိုဇော် Programming Languages - 1 12 05-09-2011 11:00 AM
Software မသုံးဘဲ Drive ကို Password ပေးမယ် thureinsoe Windows XP424-04-2011 08:08 PM